Ntanetị weebụsaịtị na-emetụta ibiaghachi udu, ọnụego mgbanwe, na kwa nke gị search engine rankings. Nke ahụ kwuru, ọ tụrụ m n'anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị ka na-eji nwayọ nwayọ. Adam gosiri m saịtị nke taa kwadoro na GoDaddy nke na-ewere ihe karịrị 10 sekọnd iji kwado. Onye ogbenye ahụ na-eche na ha na-echekwa ego ole na ole na nnabata… kama ha na-efu ọtụtụ ego n'ihi na ndị ahịa na-agbazinye ha ego.
Ọtụtụ Ntugharị - zere iji akụ ndị agbakwunyere na-ebugharị na ibe ndị ọzọ. Na ahu nagide kpọmkwem njikọ n'ime gị onwe gị igodo. Otu ihe atụ bụ ma ọ bụrụ na saịtị gị nwere nchedo, ịchọrọ iji hụ na mmewere ọ bụla na saịtị ahụ, dịka onyonyo, anaghị ezo aka na URL na-enweghị nchebe ha. Nke ahụ ga-achọ ka onyonyo ọ bụla dị na peeji nke ga-emegharịgharị nke ọma na njikọ echekwara.
Ndị Obodo Bọtịnụ - bọtịnụ mmekọrịta ndị obodo dị egwu. A na-eburu onye nke ọ bụla n'adabereghị na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta ma anaghị elebara anya otu ha si ebu ngwa ngwa. Gbalịa iji ọrụ ndị ọzọ ga-eme ka oge ọrụ ha ka mma - ma ọ bụ zite bọtịnụ ahụ ka ha wee ghara ịmetụta ọsọ saịtị gị ma ọlị.